प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १४:२९
काठमाडौं, २५ जेठ । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले देशैभरि अक्सिजनको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । आज (सोमबार) चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर-८ स्थित् मातातीर्थ सामूदायिक अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गर्दै मन्त्री तामाङले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने कम्पनी मुनरक ईन्टरनेश्नल प्रा.ली.का प्रवन्ध निर्देशक ई. प्रशान्त झाले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आफूहरुले काम सम्पन्न गरेको बताए । र, उनले प्लान्टले २४ घण्टामा ४० लिटर क्षमताको ४० देखि ४८ वटा सिलिण्डर उत्पादन गर्ने पनि जानकारी दिए । झाले दश दिनभित्रै प्लान्ट जडान गर्न सकिने जानकारी दिए ।
उक्त आयोजनाको प्रोजेक्ट म्यानेजर पिक्सन इन्जिनियरिङ्ग सोलुसन प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक विनय श्रेष्ठ हुन ।